Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tranombakoka miady amin'ny mpampihorohoro voalohany ao Okraina, raha mbola mitohy ny ady
Tranombakoka momba ny asa fampihorohoroana any Dnipro. Ny Hall of Memory dia misy sarinà manamboninahitra sy lehilahy maherin'ny 500 maty novonoina tamin'ny hetsika izay teraka sy nonina tao amin'ny faritr'i Dnipropetrovsk. Misy cubes fitaratra misy vokany manokana an'ny KIA 50, ao anatin'izany ny haingon-trano, ny antontan-taratasy, ny boky, ny ampahany amin'ny fanamiana sy ny fitaovana, ny sasany mampiseho ny toerana nahavoa azy ireo tamin'ny bala na sombina akorandriaka.
Misy fisarihana fizahan-tany vaovao any Okraina. Antsoin'izy ireo ho fampihorohoroana io any Okraina. Lohahevitra mafana any Ukraine ny ady any Donbass. Ny faritra Atsinanana amin'ny firenena sy ny tanànan'ny Luhansk ary Donetsk dia manambara fa mahaleo tena ary tapaka avy any amin'ny faritra sisa any Okraina, saingy mitanjozotra akaikin'i Russia.
Antsoin'ny Okrainiana hoe ny Faritra fiasan'ny mpampihorohoro
Dmytro Desiateryk mpanao gazety Okrainiana iray no nanoratra lahatsoratra iray tamin'ny fitsidihany ny tranombakoka voalohany miady amin'ny mpampihorohoro voalohany ao Dnipro Io lohateny ofisialy io dia mivaky toy izao: “Museum [natokana ho an'ny] Fampisehoana sivily an'ny Fanjakan'i Dnipropetrovsk mandritra ny ATO Events” ary io dia iray amin'ny Dmytro Sampana enina an'ny Museum History National Yavornytsky. Ilay fampirantiana dia ahitana ilay diorama anatiny "Battle of Dnipro" sy ilay fampisehoana ivelany "Donbas Roads." Nisokatra ny diorama tamin'ny 25 Mey 2016, ary ny fampirantiana anaty trano tamin'ny 23 Janoary 2017.
Ny fampirantiana lehibe dia mitentina 600 metatra toradroa amin'ny rihana ambanin'ny diorama. Anisan'ireo entana 2,000 amin'ny antontan-taratasy aseho, sary, haingon'ady, ny vokatry ny tompon'andraikitra sy lehilahy, fitaovam-piadiana ary fitaovam-pitsaboana. Ny efitrano multimedia (teatira amin'ny sarimihetsika) dia manolotra horonantsary fanadihadiana telo (roa amin'ny fiteny ukrainiana ary iray amin'ny anglisy) momba ny hetsika ady any atsinanan'i Ukraine.
Ny seho ivelany dia mampiseho fiara fitaterana zazakely mpitady zazakely BMP-2, turretra tanky T-64, mortar regimental PM-43, fitaovam-piadiana hafa, fiara mpamonjy voina misy kamio UAZ-452-kamio, ary fanesoana mivaingana ny sakana iray. Saika ny entana rehetra aseho dia avy amin'ny sahan'ady. Ny tapany afovoan'ny "Donbas Roads" dia nobahanan'ny sary sokitra "A Soldier and a Girl" sy [ampahan'ny] làlambe misy fambara arabe misy ny anaran'ireo tanàna ao Donetsk sy Luhansk. Ao ambadiky ny fiara mifono vy mifono vy misy rafitra vy lehibe mampiseho ny fako ao amin'ny seranam-piaramanidina Donetsk, tsangambato ho an'ireo mahery fo Okrainiana niaro ny seranam-piaramanidina nandritra ny 242 andro.
Ny rihana ambanin'ny diorama dia manana lalantsara, efitrano fandraisam-bahiny (teatra sarimihetsika taloha ho an'ny lahateny asehon'ireo fanadihadiana), ary ny Hall of Memory (efitrano fampirantiana taloha misy rindrina misy sarin'ireo mahery fo nanery ny Reniranon'i Dnipro nandritra ny Ady Lehibe II). Ao amin'ny lobby, ny entana aseho dia apetaka amin'ny rafitra vy manamarika ny faharavana ao amin'ny seranam-piaramanidina Donetsk. Ny rindrina dia rakotry ny harato camouflage. Misy fijoroana misy lohahevitra lehibe izay milaza momba ny miaramila, mpilatsaka an-tsitrapo, mpitsabo, mpandefa toerana avy amin'ireo faritany, chaplain ary media ao an-tsaha.
Ny Hall of Memory dia misy sarinà manamboninahitra sy lehilahy maherin'ny 500 maty novonoina tamin'ny hetsika izay teraka sy nonina tao amin'ny faritr'i Dnipropetrovsk. Misy cubes fitaratra misy vokany manokana an'ny KIA 50, ao anatin'izany ny haingon-trano, ny antontan-taratasy, ny boky, ny ampahany amin'ny fanamiana sy ny fitaovana, ny sasany mampiseho ny toerana nahavoa azy ireo tamin'ny bala na sombina akorandriaka.
Teraka sy nihalehibe tany amin'ny faritra Dnipropetrovsk aho, ka tsy afaka ny tsy ho be fihetseham-po. Ny Battle of Dnipro Diorama dia tena santionany amin'ny fampielezan-kevitra Brezhnev mikorontana (nitsidika an'io toerana io i Leonid Brezhnev tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, fotoana fohy talohan'ny nahafatesany). Ny singa manan-danja dia diorama mampiseho ny fanerena ny renirano eo akaikin'i Dnipropetrovsk, novonoina tamin'ny fomba tena izy tamin'ny realistaistaista, miaraka amin'ny toerana mialoha be dia be vita amin'ny vatolampy dummy sy hazo. Ny nahasarika anay ankizy tamin'izany fotoana izany dia mazava ho azy ny fampiratiana ireo fitaovana sovietika nanomboka tamin'ny howitzer taloha ka hatramin'ny mpiady jet. Faly be izahay nizaha ny entana tsirairay ary tsy nisy nahalala - na tsy niraharaha ny hahafantatra - na efa nampiasaina tamin'ny ady io.
Ny ATO Museum dia niaina fiainam-baovao amin'ity granite sy vy ity. Ireo fiara tototry ny bala, ny takelaka misy arabe misy ny mari-toerana mahazatra, ny vokany manokana an'ny KIAs, ny teatra fijerena sary mihetsika - ity famolavolana nomanina tsara sy marolafy ity dia mahatonga ny olona iray ho toy ny mamaky tantara ady na mijery blockbuster ady, na dia mandray anjara amin'ny sehatry ny ady aza. ary azo antoka fa mahatonga ity tranombakoka ity ho iray amin'ireo tsara indrindra any Okraina.
Niresaka tamin'ny tompon'andraikitra iray amin'ny tranombakoka aho ary nanontany hoe ahoana no nanombohan'ilay tetikasa.
"Natalia Khazan, mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Foundation Defense Okrainiana, no iray tamin'ireo voalohany nahatakatra an'io hevitra io," hoy ilay lehilahy. “Nisy koa miaramila, mpilatsaka an-tsitrapo ary medika niady tamin'ny ady voalohany tamin'ny taona 2014-15. Na teo aza izany dia nanana zavatra vitsivitsy tao amin'ny kaonty naseho sy nahita maso izahay. Ny faritra misy anay no akaiky indrindra ny eo aloha. Nanomboka ny tetik'asa izahay tamin'ny febroary 2016. Voalohany, fampirantiana an-kalamanjana natao ho an'ny ankizy izany, mba ho fantatr'izy ireo hoe iza no miady, amin'ny inona ary ny antony. Nampiasainay ny tranom-bakoka ao an-tanàna ao Museum Museum ary notendrenay Viktor Hukalo mpanakanto Kyiv hanamboatra ny endrika. Ny fampirantiana voalohany dia nahatratra 1,000 metatra toradroa. Alao an-tsaina fotsiny: ny tetik'asa dia noforonina tamin'ny volana febambra ary natomboka tamin'ny 26 Mey. Asa mafy sy mafana fo telo volana! Nankatoavin'ny tompon'andraikitra amin'ny ambaratonga rehetra ny hevitra. Ny anaram-boninahitra 'Museum ATO' dia malaza, raha oharina amin'ny 'Fampisehoana sivily an'ny Fanjakan'i Dnipropetrovsk nandritra ny hetsika ATO.' ”
Inona no hevi-dehibe?
“Omeo voninahitra ny velona ary omeo voninahitra ny maty, hatramin'ny andro voalohany. Tianay ny olona hahita ny herimpo sy ny fiadiana ampiasain'ny manamboninahitra sy ny lehilahy aminay. Mandeha amin'ny arabe milamina isika miaraka amin'ny lanitra madio any ambony, ary mazàna adinontsika fa ady dia eo amin'ny 60 kilaometatra miala eo.
“Ny tantaran'ity ady ity dia aseho amin'ny faritra maromaro. Tsy manome lanja ny vondron'olona iray izahay raha oharina amin'ny manaraka. Mpanampy, olona nafindra vonjimaika, mpilatsaka an-tsitrapo, chaplain, mpitsabo, mpanao gazety, ny fiarahamonina Okrainiana rehetra, Okraina rehetra izay manohitra ny fahavalo. Ny tena zava-dehibe dia ny fampisehoana ny marina momba ity ady ity. Izahay dia manambatra ny ety ivelany miaraka amin'ny fampisehoana anatiny. Ny ampahany ivelany dia misy zavatra marobe aseho ary mampahafantatra ny mpitsidika ny lohahevitra ady. Ny fizarana lehibe dia misy fizarana telo, ao anatin'izany ny atitany misy sakana misy lohahevitra enina, ny Hall of Memory izay ivavahanay amin'ny KIAs, ary ny sinema. ”
Iza amin'ireo fizarana ireo no heverinao ho zava-dehibe indrindra?
“Samy manan-danja daholo izy ireo. Na dia mamela ny hozatrao aza ny Hall of Memory, ny teatra sarimihetsika no ivon'ny fampirantiana. Mponina 560 ao amin'ny faritr'i Dnipropetrovsk no maty novonoina tamin'ny hetsika ary natokana ho azy ireo ny Hall. Tsy nokasaina hatao efitrano fampirantiana izany, fa avy eo nanomboka nitondra entana isan-karazany ny havana sy ny mpiara-dia amin'ny KIA. Ity ampahan'ny tranombakoka ity dia porofo mivaingana indrindra momba ny halehiben'ity ady ity sy ny haavon'ny herisetra ataon'i [Russia]. Mitsidika ao anatiny ireo mpitsidika ary mahita ireo sary nilahatra teo amin'ny rindrina hatrany amin'ny gorodona ka hatramin'ny valindrihana, cubes am-baravarankely 50 mampiseho ny zava-misy amin'ny teny tsy azo antoka.
“Manolotra horonantsary fanadihadiana amin'ny fiteny ukrainiana sy anglisy, izay maharitra 30 minitra, ny sinema. Namboarina izy ireo mba tsy hisy hamela ny mpanatrika ho tsy misy korontana. Mampiseho ny olona rehetra izy ireo - miaramila, mpitsabo, mpilatsaka an-tsitrapo, chaplain, mpanao gazety - izay tafiditra ao anatin'ilay fampirantiana ny sariny sy ny tantarany. Fitaovana maoderina ny teatra sinema, miaraka amina projet 10 miantoka ny fahitana panoramic 360o. Kyiv angamba no toerana tokana ampiasaina ny fitaovana toy izany. Ny lafiny teknika amin'ilay tetik'asa dia tena sarotra, raha jerena fa ny ankamaroan'ny fitaovana vidéo dia nalaina avy amin'ny finday avoakan'ny mpiambina ary tsy maintsy namboarina mba hamoahana azy amin'ny efijery lehibe, saingy voavahanay izany olana izany. ”
Ahoana ny amin'ny fanadihadiana amin'ny teny anglisy?
“Ny tranombakoka misy antsika dia ampahany amin'ny làlan-kizorana ho an'ireo delegasiona ofisialy rehetra, ao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny parlemanta, ny minisitra, ny masoivoho ary ny filoha. Porofo izany fa nanao ny zavatra rehetra tamin'ny fomba tsara isika. ”
Firy ny mpitsidika hatreto?
“Ny tombatombanay dia mampiseho maherin'ny 160,000 amin'ny 2016-17. Ny zava-dehibe dia maimaim-poana ny fidirana. Betsaka ny tanora eo amin'ireo mpitsidika satria ny tranombakoka dia ao anatin'ny fandaharam-pianarana amin'ny lise. Misy tetik'asa tia tanindrazana mahaliana mifandraika amin'ilay fantatra amin'ny hoe 'The Roads of Heroes' rehefa tonga any Dnipro avy amin'ny faritra maro ao amin'ny faritra ny vondrona mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa ary mitsidika ny tobin'ny tafika faha-25 Brigade. Aseho azy ireo ny andavanandrom-piainan'ny mpiasa, ny fitaovana, ny fihaonany amin'ireo maherifon'ny ady. Amin'ny farany, mitsidika ny tranombakoka izy ireo ary mandeha amin'ny alàlan'ny Memory of akaikin'ny tranon'ny fitantam-paritany. Nandany andro iray izy ireo nijery fizahana fampahalalana marobe. Maoderina koa ny tranombakantsika satria miasa amin'ny sehatra ifandraisana izy io. ”
Misy entana aseho ve misy dikany manokana aminao?
“Samy manao araka ny tantaran'ny tsirairay avy izy rehetra. Izy ireo dia raisintsika avy amin'ny tsipika famaritana. Tsy misy dummies. Ny entana tsirairay aseho dia tena izy. Averiko ny tenako: ny Hall of Memory dia zava-dehibe indrindra amiko. Ny zava-drehetra dia tototry ny fanaintainan'ny olombelona. Ahoana no hanadinoako karatra paositra avy amin'ny renin'ny miaramila lavo iray. Nanoratra izy fa tsy mila antontan-taratasy manamarina ny rosia, tokony ho tsapan'ny olona fa tsy hamaky ny karatra paositry ny tsingerintaona nahaterahany mihitsy ny zanany lahy. Vehivavy iray hafa no nitondra ny havizanan'ny adin'ny zanany lahy ary nangataka ny akanjo tokony haseho mba hahitan'ny iray ny kalon'ny bala fahavalo namono azy.
“Misy taratasy iray avy amin'ny zazavavy enin-taona izay novonoina ho faty ny rainy tamin'ny volana Jolay. Tokony hiditra amin'ny Kilasy 1 izy amin'ny volana septambra 1. Niresaka tamin'ny ankizy hafa mitovy taona aminy ny taratasiny, nilaza fa hitondra anao any am-pianarana ny dadanao amin'ny 1 septambra, saingy maty tamin'ny ady ny raiko.
“Misy sombina akorandriaka sy bala voarainay avy amin'ny Hopitaly Mechnikov. Izy ireo dia aseho miaraka amin'ny sombintsombiny tantara momba ny tranga. Zavatra tsy maintsy tadidintsika izany. ”
Nahamarika aho fa ny fiaran'ny ATO dia aseho miaraka amin'ny dummies avy amin'ny fampirantiana Sovietika natokana ho an'ny WW II, ary ny sisa amin'ny tranombakoka dia ao anatin'ny tranobe misy diorama mampiavaka an'i Brezhnev. Fifangaroana mahaliana, sa tsy izany?
“Misy ny foto-pisainana ary misy ny fanomezam-boninahitra ireo mahery fo lavo. Zavatra iray hafa mampiavaka ny tranombakontsika amin'ny hafa dia ny tsy fametrahany fotokevitra ho an'ny mpitsidika. Ny tetik'asa iray manontolo dia valin'ny ezaka manokana nataon'ny olona an-jatony. Ny sasany mety hanana hevitra, ny hafa hitondra zavatra haseho… Tsy misy tsipika misy amin'izany fahasamihafana izany ary izany no antony tsy hisian'ny fomba ofisialy. Ny tranombakokantsika dia tsy fampielezan-kevitra. Miezaka ny tsy hanavakavaka araka izay tratra izahay ary mankasitraka ny fitsidihana rehetra. Afaka mahita ambaratonga vaovao amin'ny fifandraisana sy ny fifanampiana isika. Ny tranombakantsika dia marika iray lehibe an'i Okraina. Nisy ny Adin'ny Dnipro nandritra ny Ady Lehibe II, misy ady ho an'ny tanànan'i Dnipro izay mandeha. Izany no antonay. Ho any i Ukraine raha mbola misy Dnipro. ”